Australia: Markuu geel-jiraheennu macalin noqdo | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka November 10, 2015	0 803 Views
Muqdisho (Himilonews) – Soomaalida ku nool Australia ayaa bilaabay inay door ku yeeshaan dhaqashada geela ku nool dalka kaligii u taagan qaaradda Shanaad ee dunida kadib jah-wareer soo jiitamayay muddo badan kaas oo ka dhashay la-qabsiga dhaqameed ee dhaqashada Geela oo Australia ka ah duunyada duur-joogta ah.
Warbixin uu soo daayay fogaan aragga Puntland TV ayaa lagu soo ban-dhigay dad isugu jira Soomaali iyo Caddaan Australian ah oo kadin geela ku daajinaya kax banaan. Gaasa-bixinta geela oo aan asal ahaan laga aqoon dalka Australia ayaa Soomaalida tagtay waxay indhaha u fureen aqoonta xeesha dheer ee ku aadan dhaqashada iyo kobcinta geela.
Soomaalida ayaa waxay kaalin muuqata ka ciyaareen inay meel isugu keenaan kadin geela ah iyaga oo baraya dadka caddaanka sida loola dhaqmo loona daajiyo–iyo inay tahay wax aan la qaayibin in sida xoolaha kale loo dhaqan karo.
Haweeney kamid ah madaxda xero ay ku jireen horin geela oo uu dhinac taagnaa nin Soomaali ah ayaa sheegtay inay awal ku aheyd wax adag sida loo gaasa-bixin karo neef ay ku tirin jirtay kuwa duur-joogta ah oo uusan dheefsi laga raadinayo laheyn. Hayeeshe, wax walba waxay is-badaleen markii ay garab ka heshay ajiyaal Soomaali ah kuwaas oo ay sheegtay inay kaalin muuqata ku yeesheen inay horumar ka sameeyaan dhaqashada geela.
Intii ay sococtay warbixinta ayaa sidoo kale waxaa la arkayay aqal Soomaali–mudullo laga sameeyey duleedka xerada kuwaas oo sida muuqata hoy ahaan ay ugu hoydaan dadka caddaanka ah ee dhaqanaya geela.
Australia ayaa dhibaato ba’an ku qabtay la qabsiga nolosha geeddi-socod ee geela–iyada oo marar badan kadin geela ay soo gali jireen magaalooyinka taas oo sababtay inay dadku coleystaan. Waxaa kale oo jirtay in gumaad lagula kacay kadin badan oo geela.
Tallaabadan ayaase u muuqata mid laba-gar daaq ah oo sababi karta in–marka hore Soomaalida oo ah umadda ugu geelal badan dunida loogu yimaado cilmiga dhaqashada ee geela–taas oo ay kusii lammaanan tahay in ilbaxnimadeennu sii faafi karto haddii Soomaalidaas ay sal-dhig uga dhigaan erey-bixinta afkeenna ee ku qotonta dhaqashada xoolaheenna.
Si kastaba, tani waa bilow fiican oo ay mudan tahay in lagu bogaadiyo hiil iyo hoo si magaca sii liicaya ee Soomaali dib loogu soo celiyo heybadda aduunka casriga ah.
Previous: Markuu Wajigu kaa qarsoomo!!
Maqalka Takbiirta ayuu kaga caafimaaday xanuun hayay Dhaqtarkan.